Sebenzisa i-smartphone yakho ukurhoxisa imali kwibhanki ye-america atm
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Sebenzisa i-smartphone yakho ukukhupha imali kwi-ATM yeBhanki yaseMelika
Ke masixelele ukuba udinga imali kwaye ufuna ukukhupha imali kwiakhawunti yakho yeBhanki yaseMelika. Njengoko usondela kumatshini weATM, uyakhumbula ukuba ushiye ikhadi lakho lokutsala ekhaya. Ingaba lolu luhambo olumoshakeleyo? Hayi ukuba unayo i-Apple Pay, i-Samsung Pay okanye i-Android Pay. Ngokukodwa, kuya kufuneka ube nekhadi lakho leBhanki yaseMelika kwi-wallet yakho yedijithali.
Nje ukuba ukhethe ikhadi leBhanki yaseMelika kwisipaji sakho sedijithali, bamba ifowuni yakho ngaphezulu kwesimboli yeNFC kwiATM. Oko kukuvumela ukuba ufikelele kwikhadi lakho ngokuchukumisa umnwe wakho. Punch inombolo yakho yePIN kwikhibhodi yeATM, kwaye umatshini uza kuyikhupha ngokukhawuleza imali yakho. Gcina ukhumbula ukuba ayizizo zonke ii-ATM kunye neeapos zeBhanki yaseMelika eziza kusebenza okwangoku ngezi nkonzo zentlawulo yokuhamba Ibhanki yaseMelika iATM kunye neeapos ezihambelana neApple Pay, Samsung Pay kunye neApple Pay zibonisa uphawu lweNFC kubo.
Ukwenza ifowuni yakho ilungele ukusebenza kwi-ATM yeBhanki yaseMelika, kufuneka uqale uthathe isigqibo sokuba yeyiphi inkonzo oyisebenzisayo yokuhlawula. Ngokucacileyo, oku kuxhomekeke kwiqonga olisebenzisayo. Abo bane-Apple iPhone 6, Apple iPhone 6 Plus, Apple iPhone 6s, Apple iPhone 6s Plus kunye neApple iPhone SE banokusebenzisa iApple Pay, kwaye abo banee-NFC ezithile ezisebenza ngeefowuni eziphathwayo ezinikwe i-Android Pay abanokuzisebenzisa. Ukuba unayo i-Samsung Galaxy Note 5, i-Samsung Galaxy S6, i-Samsung Galaxy S6 esebenzayo, i-Samsung Galaxy S6, i-Samsung Galaxy S6 Edge +, i-Samsung Galaxy S7, i-Samsung Galaxy S7 Active kunye ne-Samsung Galaxy S7.
Nje ukuba ukhethe iqonga oza kulisebenzisa, layisha ikhadi lakho lebhanki yaseMelika kwi-wallet yedijithali ehambelana nenkonzo yakho yokuhlawula. Ngelixa azikho & apos; oomatshini abaninzi beATM abasebenza ngefowuni yakho ngoku, ekupheleni konyaka kufanele ukuba ube uyigqibile iakhawunti yakho yeBhanki yaseMelika phantse kuyo nayiphi na indawo koomatshini bamatshini beATM eMelika.
Ukurhoxisa imali kwi-ATM ezithile zeBhanki yaseMelika usebenzisa i-smartphone yakho
umthombo: Ibhanki yaseMelika , Reddit nge Engadget
ukubukela iapile 6 gps vs iselfowuni
Ungayitshintsha njani ifowuni yakho ye-Android kunye nesikhangeli esingagqibekanga kuGoogle Chrome
Uyihambisa kanjani iFortnite kunye nePUBG ngqo kwi-iPhone
Ukwenza kusebenze ukumilisela umnxeba womdlalo omtsha weselfowuni ophuculwe ngaphakathi endlwini
Ukuthelekiswa kwekhamera ye-iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: yintoni eguqukileyo?
Eyona misebenzi ilungileyo ye-cyber yangoMvulo ye-2020
I-T-Mobile iphakamisa i-AT & T ukuba ibe ngowesibini ngobukhulu ekuphatheni ngaphandle kwamacingo e-U.S.